18 Afei Mose ase+ Yetro a ɔyɛ Midian sɔfo no tee nea Onyankopɔn ayɛ ama Mose ne ne man Israel ne sɛnea Yehowa yii Israel fii Egypt+ no nyinaa. 2 Enti Mose ase Yetro faa Mose yere Sipora, a na wama ɔkɔ ne nkyɛn no, 3 na ɔfaa ne mmabarima baanu+ kaa ho. Obiako din de Gersom,+ efisɛ ɔkae sɛ, “Meyɛ ɔhɔho a mabɛtena ananafo asase so”; 4 na nea ɔka ho no nso de Elieser,+ efisɛ ɔkae sɛ, “Onyankopɔn a m’agya som no no ne me boafo, na ɔno na ogyee me fii Farao nkrante ano.”+ 5 Enti Mose ase Yetro, ne ne mma no ne ne yere baa Mose nkyɛn wɔ sare no so, nokware Nyankopɔn no bepɔw ho.+ 6 Afei ɔsoma ma wɔkɔbɔɔ Mose amanneɛ sɛ: “Me, w’ase Yetro,+ ne wo yere ne ne mma baanu no aba wo nkyɛn wɔ ha.” 7 Ntɛm ara na Mose fii adi kohyiaa n’ase, na ɔbɔɔ ne mu ase few n’ano,+ na obiara bisaa ne yɔnko sɛnea ne ho te. Afei wɔkɔɔ ntamadan mu. 8 Na Mose kaa nea Israel nti Yehowa de yɛɛ Farao ne Egypt+ no nyinaa ho asɛm kyerɛɛ n’ase. Na amane a wohui wɔ kwan so+ ne sɛnea Yehowa gyee wɔn+ no nyinaa nso, ɔka kyerɛɛ no. 9 Bere a Yetro tee papa a Yehowa ayɛ ama Israel ne gye a ogyee wɔn fii Egypt nsam no, n’ani gyei.+ 10 Na Yetro kae sɛ: “Nhyira nka Yehowa a wagye mo afi Egypt ne Farao nsam, nea oyii nkurɔfo no fii Egypt nkoasom mu no.+ 11 Sɛ mehwɛ nea Yehowa de baa Egyptfo so bere a wɔredi Israelfo so akokurokosɛm no a, mihu ampa sɛ Yehowa sõ sen anyame foforo nyinaa.”+ 12 Afei Mose ase Yetro bɔɔ ɔhyew afɔre ne afɔre foforo maa Onyankopɔn,*+ na Aaron ne Israel mpanyimfo nyinaa ne Mose ase didii wɔ nokware Nyankopɔn no anim.+ 13 Ade kyee no, Mose tenaa ase sɛ ɔrebu atɛn,+ sɛnea daa ɔyɛ no, na nkurɔfo no begyinaa Mose so fi anɔpa kosii anwummere. 14 Na Mose ase huu nea ɔreyɛ ma nkurɔfo no nyinaa, na obisae sɛ: “Dɛn na woreyɛ ɔman yi? Dɛn nti na wo nkutoo na wote hɔ ma nnipa yi nyinaa abegyina wo so fi anɔpa kosi anwummere?” 15 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ n’ase sɛ: “Nkurɔfo no ba me nkyɛn behu Onyankopɔn.+ 16 Sɛ asɛm bi sɔre+ nnipa baanu ntam a, wɔde ba ma midi, na mema wohu nokware Nyankopɔn no adwene ne ne mmara.”+ 17 Ɛnna Mose ase ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ papa sɛ wobɛyɛ saa. 18 Woyɛ saa a, wo ne ɔman a wɔka wo ho yi nyinaa bɛbrɛ, efisɛ adwuma no boro wo so.+ Wo nkutoo ntumi nyɛ.+ 19 Afei tie me.+ Metu wo fo, na Onyankopɔn bedi w’akyi.+ Wo de, gyina ɔman no ananmu wɔ nokware Nyankopɔn no anim,+ na fa wɔn nsɛm bra nokware Nyankopɔn anim.+ 20 Afei kyerɛ wɔn ahyɛde ne mmara no,+ na ma wonhu ɔkwan a wɔmfa so ne adwuma a wɔnyɛ.+ 21 Na w’ankasa hwɛ nkurɔfo no mu paw mmarima a wɔfata,+ wosuro Onyankopɔn,+ wodi nokware,+ na wɔnyɛ adifudepɛ;+ yɛ wɔn mpanyimfo wɔ nnipa apem biara+ so, ɔha biara so, aduonum biara so, ne edu biara+ so. 22 Na bere biara a ɛho behia no, wommu nkurɔfo no atɛn, nanso asɛm a emu yɛ duru bi sɔre a, wɔmfa mmrɛ wo;+ na nsɛm nketenkete de, wɔn ankasa nni. Enti ma wɔmmoa wo na adwuma no nyɛ mmerɛw mma wo.+ 23 Sɛ woyɛ eyi, na ɛyɛ Onyankopɔn ahyɛde a, wobetumi agyina ano na ɔman yi nyinaa de asomdwoe akɔ wɔn tenabea.”+ 24 Mose antwentwɛn ne nan ase koraa na otiee n’ase no, na ɔyɛɛ nea ɔka kyerɛɛ no no nyinaa.+ 25 Ɛnna Mose paw Israelfo no mu mmarima a wɔfata yɛɛ wɔn mpanyimfo+ wɔ nnipa apem biara so, ɔha biara so, aduonum biara so, ne edu biara so. 26 Na wobuu nkurɔfo no atɛn bere biara a ɛho behia. Asɛm a emu yɛ duru sɔre a, wɔde brɛ Mose,+ na nsɛm nketenkete no de, wɔn ankasa di. 27 Afei Mose gyaa n’ase kwan+ ma ɔkɔɔ n’asase so.
^ Anaasɛ, “ɔde brɛɛ no.”